प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य र विप्लवलाई जनयुद्धका एक योद्धाले लेखे यस्तो भावुक चिठी – Pahilo Page
परिवर्तनको निम्ति महान जनयुद्धका योजनाकार प्रचण्ड, बाबुराम, बैध्य र विप्लव लाई युग परिवर्तनको निम्ति अझै एकताको लागी क्रान्तिकारी रातो अभिवादन…
जति बेला परिवर्तनको सपनासहित हामी तपाईंहरु कै नेतृत्व र तपाईले नै दिएको प्रशिक्षणमा सहभागी हुँदा पाएको क्रान्तिको शिक्षा अहिले पनि मन मस्तिष्कमा ताजै बनेर घुमिरहेको हुन्छ । राजाको कुर शासन जसरी सबै मिलेर सम्भव भएको थियो । गणतन्त्र ल्याउनको लागी तपाईंहरुको नेतृत्वको सफलताले नै आएको हो ।
तर समस्या गणतन्त्र आए पछि पनि समाजमा रहेको अत्याचार, दलाल र केहि मुठ्ठीभरका पुजीवादीहरुले गरीब माथीको भेदभाव र थिचोमिचोको सहन नसकिने गरि आएको पाइयो । बेरोजगारको संख्या बढ्यो । शिक्षा स्वास्थको विकास त भयो नै तर गरिबको लागी भएन केहि मुठ्ठीभरका मानिसको लागी मात्र भयो । अब एउटा प्रस्न सोध्न मन लाग्यो गणतन्त्र भनेको कुन बर्गको राज्य ब्यवस्था हो ? र यो उत्पीडितहरुको राज्य व्यवस्था होकि होइन ? होइन भन्ने किन त्यही व्यवस्थामा टासिनु हुन्छ ? हामीले प्रचण्डपथ विकास के का र किन गरेका थियो ?
आजको प्रचण्ड पुस्पकमल दाहालमा रुपान्तरण भै सकेको हो ? या अझै प्रचण्ड पथको विकास हुन्छ ? बाबुराम कमरेडलाई हामीले एसियाको रातो तारा भन्थ्यो अहिले एसियाको सबै भन्दा घृणीत पात्र तपाई लाई बनाएका छन् । विश्व कम्युनिस्ट नेता बन्ने हैसियत भएको नेता बाबुराम आज एउटा कुर्सीको लागी इज्जत गुमाएको देख्दा आफै लाई लाज मानेर हिड्नु पर्छ । इतिहास देखी क्रान्तिको कुरा गरेर नथाक्ने जनयुद्धको गुरु बैध्य बा संसदीय चुनाव लाई उपयोग गरेको देख्दा क्रान्ति प्रतिको प्रतिबद्धता भन्दा पनि न यता न उताको अबस्थामा डुब्नु भयो ।
उपयोगको नाममा आफै उत्तानो पर्ने रणनीति बनाउनु त ठिक भएन नि बैध्य बा ? किन क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर उहि उतार्ने पर्ने खाल्डो खोज्दै जानुहुन्छ ? समाज रुपान्तरणको लागि लाखौं गरिब मजदुर को सपनाहरु के अब खरानी नै हुनेहुन त ? विप्लव कमरेडले पनि महसुस गर्नु भएको होला क्रान्ति भनेको सबैले मिलेर मात्र पूरा गर्न सकिदो रहेछ भनेर । अब नयाँ आधारमा नयाँ एकता अनिवार्य भएको छ । यति बेला कम्युनिस्टको बर्ग सत्रु र आफ्नो अस्तित्व नै जोगाउन नसक्ने अबस्थामा पुगेको छ। । त्यसैले अबको मिलन बिन्दुको आधार रास्ट्र, जनता, उत्पीडितहरुको राज्य निर्माण निम्ति बैज्ञानिक बिचारको अन्तिम प्रयोग गर्नु पर्ला कि ?
आदरणीय कमरेडहरु तत्कालीन सर्बोच्च कमाण्डर कमरेड प्रचण्ड, जनयुद्धको गुरु कमरेड किरण, एसियाको रातो तारा कमरेड बाबुराम ,युवा नेतृत्व जुझारु नेता कमरेड विप्लव सबै शिर्ष नेतृत्वहरुले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ गरिबहरु दास बन्दै छन् पुजीवादीहरुले गरिब माथी शोसन कायम गरिराखेका छन् । प्रति महिना लाखौंको संख्यामा युवा रोजिरोटीको लागी विदेश पलायन भएका छन् ।
आदरणीय नेतृत्व कमरेडहरु समयमा सबैले एउटा निचोड सहित एकता हुन सकेन भन्ने सबैको राजनीतिक भविस्य त सिधिने नै छ महान न्यायको लागी सहिदको सपना र मुक्तिको प्रखाइमा बसेका उत्पीडित जनताको भविस्य पनि सिधिने छ । पुरानो राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि एक्लाएक्लै संघर्ष गरेर सम्भव रहिन्छ भन्ने कतिको बुझ्नु भयो ? हामीलाई कलिलो उमेर बाट परिवर्तनको सपना देखाउने नेतृत्वहरु एउटै बोलीबाट एउटै उद्घोस गरेका नेतृत्वहरु आज किन बर्ग दुस्मन जस्तै एकले आर्को प्रती प्रहार गरिरहेका छौ ?
आदरणीय कमरेडहरु यहीँ स्थिति रहिरह्यो भन्ने अब हाम्रो बर्ग दुस्मन अरु नभएर हामी भित्र एकले आर्को लाई सिध्याउने अन्तर संघर्ष मै हामी सिधिने छौ । र हिजोका बर्ग दुस्मनहरु मजाले ताली बजाउने छन् र जनता लाई नयाँ भ्रम दिएर न्यायको लागि लडेको युद्ध र आन्दोलन लाई अपराधी घोषणा गरेर गरिब र सर्बहाराको घरमा कालो वारेन्ट जारी गर्नेछन् । हाम्रो नेतृत्वहरुलाई बालकृष्ण जसरी पिजडामा कैद गर्नेछन् ।
अनि नयाँ पुस्ताले देखेको सुन्दर सपना खरानी बनेर विश्व बजारमा लिलाम हुनेछन् । त्यति बेला परिवर्तनको सपना देख्नेहरु बन्दुकको नाल मुनि कैद गरिने छ । अनि नाम चलेका नेतृत्वहरुको नाम एकादेशको कथा बनेर स्याल र भ्यागुतोको कथा बनाएर हराउँने छ । त्यसकारण कृपया तपाईहरु एक पटक घाइते भएको बर्ग दुस्मन संग जुझ्ने अन्तिम कोशिस तिर गर्नुहोस् । सर्बहारा जनताले यही अपेक्षा गरेका छन।
गणतन्त्र घोषणापछि विचारधारात्मक रुपमा फड्को मार्नु पर्ने आसस्यता थियो तर विभिन्न कारण होलान् त्यसो हुन् सकेन । अब गम्भीरतापूर्बक समिक्षा सहित अघि बढ्न जरुरी छ । प्रचण्ड पथको थप विकास बैध्य बाको जनबिद्रोह विप्लवको एकीकृत जनक्रान्तीको बाबुरामको नयाँ नेपाल फ्युजन गरेर घायल भएको बर्ग दुस्मन विरुद्ध अन्तिम प्रहार सहितको देश विकासको नयाँ मोडेल अनिवार्य भएको छ ।आदरणीय कमरेडहरु, हामी बिचमा चलेको अन्तर संघर्ष क्रान्ति प्रतिको आ आफ्नै बुझाइको कारण पनि होला । तर परिवर्तन प्रतिको चाहाना र व्यवस्था प्रतिको लक्ष्य एउटै छ । मात्र पद प्रतिस्ठा र लोभ लालचले घातक अवस्थामा पुराएको देखिन्छ ।जनता बिभाजनमा रमाउन् चाहदैनन् । बिभाजन हुँदा जनता निकै दुखी देखिन्छ परिवर्तन प्रतिको आसा हराएको देखिन्छ । उर्जासिल युवाहरू सुन्दर जिबन खोज्दा खोज्दै निराशा बढेर जोखिमपर्ूण निर्णय गर्दै खाडी सहित विस्वको विभिन्न देश प्रतिदिन दुख र अँखा बाट आसुका धारा बगाएका छन् । महिला दिदिबहिनीहरु आयस्रोतको बाटो खोज्दा खोज्दा कुनै उपाए नलागेर मानव तस्करीको हातमा परेर विभिन्न खबर सुनमा आइरहेको हुन्छ । जनताले धेरै ठुलो परिवर्तनको अपेक्षा राखेका छन् ।त्यो अपेक्षा पुरा गर्न सबै एक ठाउँमा आउनै पर्छ ।
संसदीय व्यवस्थालाई जसरी सुदृढीकरण गरेर निर्विकल्प भन्ने एउटा भयानक षड्यन्त्र भएको छ यो कुरा जनता लाई मान्य छैन ।निर्विकल्प हुनको लागी त सर्वहारा बर्गले मुक्ति पाएको हुनुपर्ने ।विदेशीको अगाडी बारम्बार घुडा टेक्ने संसदीय व्यवस्था लाई निर्विकल्प मानै सकिदैन ।संसदीय व्यवस्था भनेको जनता लाई उल्लू बनाएर शासकहरु सत्तामा बसेर उत्पीडित जनता माथी अत्याचार लिएर आउनु वाहेक अरुकेही गर्न सक्दैन ।
आदरणीय कमरेडहरु बर्ग सत्तालाई तिलाज्जलि दिएर वर्गसमन्वय गरेर सुधारवादको नारा भित्र जनता लामो समय सम्म बस्न सक्दैनन् ।किन कि त्यो सुधारवादको ताला चावि बुर्जुवाहरुकै हातमा हुन्छ । संसदीय व्यवस्था भित्रको राजनीतिक घटना कर्म हेर्दा पनि यो छोटो अबधिमा केहि उपलब्धि हासिल गर्न सकेन बरु जनताको अँखामा धुलो फालेर आफ्नो लुटको शासन कायम राख्न अनेक मुल्यहरु भयो र अहिले पनि हुदैछ । संसदीय व्यवस्थामा गणतन्त्र बुझाए संगै अहिले गणतन्त्र मुल्य विहीन र बदनाम मुखी भै राखेको सबैले स्पष्ट संग बुझेका छौ । विकासको नाममा बजेट घोषणा गर्ने विकास गर्ने ठाउँमा बजेट नपुग्दै भागबन्डा गरेर मुठ्ठी भरका दलालहरु अरबपती बनेर जनता लाई अभाव र गरीबीको दुष्चक्रमा राख्ने व्यवस्थामा किन हराउनु हुन्छ ?
आदरणीय कमरेडहरु अब क्रान्तिकारीहरुको केन्द्रीकरण अनिवार्य भएर आएको छ । अब नयाँ आधारमा एकता नयाँ बिचार सहितको केन्द्रिकरण सहित अगाडी बढ्न अनिवार्य भएको छ । क्रान्तिकारी विकेन्द्रीकरण भएको मा‌ैका छोपेर प्रतिक्रियावादीहरुले धेरै अवसर पाए ।
पत्रको अन्त्यमा सर्वहारा बर्गको राज्य सत्ताको निम्ति मिल्नुको आर्को विकल्प छैन ।एकता अहिलेको बस्तुगत आवस्यता र सर्वहारा बर्गको माग पनि हो । भन्दै पत्रबाट बिदा ।।।
उहीँ टिकाराम वली माओवादी आन्दोलनको सिपाही ।
प्रकाशित मिति : शनिवार, पौष ०१, २०७४ समय : १७:४८:१२ 5390 पटक पढिएको